शेविंग पछि दाह समस्या कठिन घुम्रेको कपाल को मालिक को लागि विशिष्ट छ। यो आफ्नो तेज सुझावहरू फिर्ता छाला खन्न भन्ने तथ्यलाई कारण छ। मानिसहरू, विशेष गरी ती सधैं ध्यान दिएर shaved हुनुपर्छ जसले लागि खाता गर्न मुश्किल। उदाहरणका लागि, सैन्य अनुहार शेविंग पछि दाह देखिन्छ। यो राज्य pseudofolliculitis भनिन्छ। यो पीडा र खुजली provokes। महिला मा, त्यहाँ शेविंग पछि जलन छ बिकनी क्षेत्र, underarms र खुट्टा। गंभीर अवस्थामा संक्रमण र खत गठन को घटना द्वारा विशेषता छन्।
शेविंग पछि दाह रोक्न, पुरुषहरु पनि नजिक छाला गर्न उस्तरा ल्याउन सिफारिस गरिएको छैन। यदि सम्भव छ भने, यो कम्तिमा एक दाढी बढ्न केही समय हुनुपर्छ। यो एक महिनाको लागि वा आधा सेन्टिमिटरले फिर्ता बढ्न गर्दैन केश सम्म दाढी छैन सिफारिस गरिएको छ। कि पछि तिनीहरूले विशेष कैंची संग कटौती गर्नुपर्छ।
ध्यान दिएर shaven अनुहार एक दैनिक आवश्यकता छ भने, यो मिसिन प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसलाई सुरक्षित वा प्रतिस्थापन गर्न सक्छ बिजुली छुरा। यी र अन्य उपकरणहरू शेविंग पछि जलन पैदा छैन।
यसलाई प्रभावकारी र depilatory क्रीम छ। तथापि, बारम्बार प्रयोग पनि छाला को जलन हुन सक्छ। त्यसैले पनि बारम्बार (हप्ताको समयमा एक पटक वा दुई पटक भन्दा बढी), प्रयोगको सिफारिस गरिएको छैन। अनावश्यक लक्षण रोक्न ध्यान निर्देशनहरू पढ्नुहोस् गर्नुपर्छ। प्रयोग पछि, यो तुरुन्तै निम्नानुसार धुन।
यो शेविंग पछि जलन पैदा गर्दैन एक लेजर प्रयोग गर्नुहोस्। प्रयोग गर्दा यो विधि कपाल follicles को विनाश उत्पादन र यसरी बाल विकास कम गर्छ।
यदि मिसिन छ प्रयुक्त, यो छ सिफारिस अघि शेविंग धुने संग न्यानो पानी। यो hairs mitigate र आफ्नो हटाउनका लागि प्रक्रिया सरल हुनेछ। साथै, यो मइस्चराइजिंग जेल वा क्रिम प्रयोग सिफारिस गरिएको छ। यो शेविंग अघि केही मिनेट लागू गर्न उचित छ। मेशिन प्रयोग गरेर, तपाईँले नियमित रूपमा ब्लेड परिवर्तन गर्नुपर्छ।
वृद्धि को दिशा मा सिफारिस शेविंग hairs। बाहिर लैजान मिसिन केही समय मा नै साइट हुँदैन हुनुहोस्। पनि शेविंग समयमा छाला सुत्छन् गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
प्रक्रिया पछि साबुन र पानी संग धुन गर्नुपर्छ। यसलाई आफ्नो अनुहार सुनिंनु तौलिया कम गर्न सुन्दर पानी मा भिगो लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ।
बाँकी hairs को अनुहार बाट हटाउन एक नम washcloth एक परिपत्र गति मा दल्नु उत्पादन हुनुपर्छ।
को जलन को महिला मा बाल हटाउने पछि घटना विभिन्न कारण कारण हुन सक्छ। तथापि, प्रायजसो यो छाला को वृद्धि संवेदनशीलता कारण हो।
यो कपाल हटाउने उपचार को अप्रिय प्रभाव रोक्न गर्न एक विशेष मिसिन, र केवल उच्चतम गुणस्तर प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। तपाईं बनाउन हुँदैन बिकनी क्षेत्र मा कपाल हटाउने खुट्टा शेविंग लागि एक-बन्द मिसिन।
प्रक्रिया समयमा, तपाईं धनी फोम सिर्जना जो विशेष कस्मेटिक्स, प्रयोग गर्नुपर्छ। यो जलन कम वा यसलाई रोक्न, छाला अधिक चिल्लो र सजिलो छुरा सार्नुहोस् सुनिश्चित गर्दछ।
धेरै संवेदनशील छाला कपाल हटाउने प्रक्रिया को लागि आफ्नो विकास को दिशा मा बाहिर गर्नुपर्छ।
विशेष आफ्टरशेव प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्। यी विभिन्न ठंडा वा toning क्रीम, मइस्चराइजिंग gels समावेश गर्नुहोस्।
यसलाई पहिले नै देखा जलन र सुनिंनु निर्मूल गर्न बिरूवा घटक देखि धन प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। उदाहरणका लागि, लागू क्रीम कैलेंडुला हटाउनेछ प्राप्त गर्न सक्छन् छाला मा रातो स्थलहरू शेविंग पछि।
"Echinacea" क्लिनिक। मास्को मा चिकित्सा केन्द्र। क्लिनिक "Echinacea", मास्को
हाइपरटेन्सनमा लोक उपचार द्वारा दबाबको कमी
को घट्यो lymphocytes के?
Hysteroscopy: समीक्षा, प्रभाव, सङ्केत गर्छ
पेटलाई सुखार्दै। कसरी एक फ्लैट पेट प्राप्त गर्ने?
बैजनी सुनगाभा (तस्विरमा)। तिनीहरूलाई के सुनगाभाहरू प्रकार र कसरी ख्याल गर्ने?
उत्तरी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय। सफलताको 85 वर्षको इतिहास
कुकुर kadebo: नस्ल, वर्णन, सुविधा र समीक्षा विशेषता
टम हार्डी टाटु: संख्या, मूल्य
पानी तताउने बिजुली छुट्टी प्रवाह: विशेषताहरु र प्रकार
आफ्नै हातले कफी सिमी देखि एक कप कफी